वन मासेर बसेको नयाँ बस्तीमा ‘रोग सार्ने पशुपक्षी फैलिन्छन्’:: Naya Nepal
वन मासेर बसेको नयाँ बस्तीमा ‘रोग सार्ने पशुपक्षी फैलिन्छन्’
वनजङ्गल भएको क्षेत्रलाई खेतबारी र सहर बनाउँदा पशुबाट विभिन्न रोग मानिसमा सर्ने सम्भावना बढेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।
एउटा अध्ययनका अनुसार प्राकृतिक प्रदेशमा मानिसले गरेको परिवर्तनका कारण गर्दा धेरै वन्यजीवहरू विस्थापित हुने भए पनि रोग बोक्न सक्ने प्रजातिहरूलाई त्यो फाप्न सक्छ।
यो अध्ययनले प्रकृतिको दोहनका कारण महामारी बढ्ने मान्यतालाई पुष्टि गर्ने प्रमाण थपेको छ।
चारवटा नयाँ रोगमध्ये तीनवटा पशुपक्षीबाट आएको वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ।
मानिसहरूले स्थानको स्वरूप परिवर्तन गरिँदिँदा सङ्क्रामक रोग फैलाउन सक्ने प्रजातिलाई आफू फैलिन सहज भएको यो अध्ययनले देखाएको छ।
वन्यजीवको प्राकृतिक वासस्थानलाई खेतबारी, चरन र बस्ती बनाउँदा मानिसहरूले थाहा नपाईकनै रोग लगाउने कीटाणुहरू आफूमा सर्ने सम्भावना बढाएका हुन्छन्।
“हाम्रो अध्ययनले मानवको बढी प्रभाव भएको वातावरणमा बस्ने जीवले सङ्क्रामक रोग बोक्न सक्ने र मानिसलाई बिरामी पार्न सक्ने देखाएको छ,” यूनिर्सिटी कलेज लन्डन (यूसीएल) का रोरी गिबले भने।
ठाउँको स्वरूप फेर्दा कसरी रोग फैलिन्छ?
वनजङ्गल, घाँसेमैदान र मरुभूमिलाई सहर वा खेत बनाउँदा धेरै वन्यजीवहरू लोप भएका छन्।
मानिसले पृथ्वीको आधाभन्दा बढी बस्नयोग्य भूमिमा परिवर्तन गरेका छन्।
लामो आयु भएका र विशेष वासस्थान चाहिने गैँडाजस्ता जीवको तुलनामा छोटो आयु भएका र जहाँ पनि पाइने मुसा र परेवाजस्ता पशुपक्षी मौलाएका छन्।
अन्य वन्यजीव मासिए पनि धेरै किसिमका विषाणु बोक्न सक्ने मुसा र लोखर्के जातका जीवहरू सहरमा मौलाउँछन्।
यो नयाँ प्रमाण झन्डै ७,००० वटा प्रजातिबारे गरिएका १८४ वटा अध्ययनबाट सङ्कलित तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेर निकालिएको हो। ती प्रजातिमध्ये ३७६ वटाले मानिसमा रोग लगाउने जीवाणु सार्ने गरेका छन्।
रोग सर्ने क्रमलाई कसरी रोक्न सकिन्छ?
रोग लगाउने जीवाणु अन्य जीवबाट मानिसमा सर्ने प्रक्रियालाई वैज्ञानिकहरुले ‘स्पिलओभर’ भन्ने गरेका छन्। त्यसका लागि विभिन्न कारकहरूको भूमिका हुन्छ।
केही जीवाणुहरूले महामारी गराउँछन्। तीमध्ये केही महामारी विश्वव्यापी बन्छन्।
वन्यजीवको सिकार, तस्करी वा वासस्थानको विनाशले हुने संसर्गका कारण नयाँ रोगको जोखिम बढ्ने कुरा हामीलाई थाहा छ।
कोरोनाभाइरस चमेरोबाट अन्य जीवले मानिसमा सारेको विश्वास गरिन्छ। यो भाइरसको वन्यजीवसँग सम्बन्ध भएको बलियो सङ्केत फेला परेको छ।
प्रकृतिको दोहनले ‘नयाँ रोगको महामारी’ कसरी?
नयाँ अध्ययनको निष्कर्ष नेचर जर्नलमा प्रकाशित भएको छ।
प्राकृतिक वासस्थानमा भन्दा मानवसिर्जित वातावरणमा बस्ने जीवहरूले बढी हानिकारक जीवाणु बोक्ने यो अध्ययनले देखाएको छ।
अनि यसले निर्विघ्न घुम्ने वन्यजीवले रोग सार्ने गलत धारणा मानिसहरूमा भएको देखाएको छ।
तर वास्तवमा प्राकृतिक स्थानलाई खेत, चरन, सहर वा गाउँ बनाउँदा बढी जोखिम हुन्छ।
यूसीएलमा प्राध्यापन गर्ने केट जोन्स यो अध्ययनले देखाएको कुराले भविष्यमा जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम कम गर्न रणनीतिको आवश्यकता औँल्याएको बताउँछिन्।
“खेती गर्ने र सहरको क्षेत्र आगामी दशकहरूमा बढिरहने अनुमान गरिएकाले हामीले ती स्थानमा निगरानी र स्वास्थ्यसेवालाई सबल बनाउनुपर्छ,” उनले भनिन्।
मुसा र परेवा किन मौलाउँदैछन्?
यो अध्ययन खेती र सहर निर्माणका लागि जग्गाजमिन परिवर्तन गर्दा उस्तै प्रजातिका जीवहरू मौलाएको विषयमा पहिला गरिएको एउटा अनुसन्धानमा आधारित छ।
त्यति सजिलै नपाइने जीवको तुलनामा मुसा र परेवाहरू अहिले फैलिएको देखिन्छ।
आफ्नो वासस्थानमा मानिसले परिवर्तन गरिँदिँदा धेरै जीवहरू मासिएका छन्।
तिनको साटो सबैतिर पाइने जीवहरू फैलिएका छन्। सहरमा परेवा र खेतीपाती हुने ठाउँमा मुसा जताततै देखिन्छन्।
तर तिनमा धेरै रोगहरू पनि पाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश : नाम आयो, काम कहिले ?
दाङ-लामो समयपछि प्रदेश सरकारले नाम र राजधानी प्राप्त गरेको छ । प्रदेश राजधानीको नाम र स्थान टुंगिएसँगै अब तोकिएको स्थानबाट कहिले सेवा सुरु हुने भन्ने बारेमा नागरिकहरुले चासो दिन थालेका छन् ।
प्रादेशिक राजधानी दाङको भालुवाङलाई तोकिएपछि जिल्लाका नागरिकहरु दैनिक सयांै सङ्ख्यामा भालुवाङ पुग्ने गरेका छन् । जसले गर्दा भालुवाङको चहल पहल समेत बढेको छ । तर उक्त क्षेत्रमा पुग्ने नागरिकको सबैको प्रश्न एउटै रहेको छ– दाङबाटै कहिले सेवा सुरु हुन्छ ? भालुवाङमा भेटिएका एक प्रदेश सभाका सदस्यले छिट्टै दाङबाट नै कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका थिए ।
राजधानी तोकिएपछि तोकिएको स्थानबाट कार्य सञ्चालन गर्ने सरकारले पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । यस कार्यलाई अगाडि वढाउन उनले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । ‘प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएको दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाउँछौ भन्ने स्थानमा जान हामीलाई मन छैन,’ उनले भने । त्यसैले दाङबाटै छिटै सेवा सुरु गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सोही स्थान निवासी तथा राप्ती भालुवाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जगत पोख्रेलले प्रदेश सरकारले थाल्ने कार्यमा आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘हामी हाम्रो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने तयार रहेका छौं,’ अध्यक्ष पोख्रेलले भने । प्रादेशिक राजधानी भएसँगै यसर क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ रहेको छ । विकासले पछाडि परेको यस क्षेत्रमा विकासले गति लिने उनको अपेक्षा छ ।
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा प्रादेशिक राजधानी सरोकार समितिका संयोजक नारायणप्रसाद भुसालले प्रादेशिक राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग हुने बताए । ‘हामी सरकारलाई सहयोग गर्ने तयार रहेका छौ,’ अध्यक्ष भुसालले भने, ‘प्रदेश सरकार तत्कालै यहीबाट सञ्चालन गर्ने समस्या भएमा हामीहरुले हाम्रा भवनहरु दिन तयार रहेका छौं,’ उनले भने । स्थायी राजधानी घोषणा हुनेबित्तिकै भाडा वृद्धि नगर्न आग्रह गरे ।
राजधानी आउनेबित्तिकै घर धनीहरुले भाडा वृद्धि गर्दा सबैलाई समस्या हुने भएकाले वढाउन नहुने उनले बताए । त्यसै गरेर व्यवसायीहरुले पनि आफूले दिने सेवामा मूल्य वृद्धि गर्ने नहुने बताएका छन् । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विरबहादुर रावत (विरु)ले प्रादेशिक राजधानी आएसँगै चुनौती पनि थपिएको बताए ।
चुनौतीलाई आफूहरुले अवसरको रुपमा लिएर अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘हामीले हाम्रो दायित्व पूरा गर्नेछौं,’ रावतले भने । व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि सामाजिक स्वार्थका लागि सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भालुवाङबाट तत्कालै प्रदेश राजधानीले दिने सेवा दिन सकिने राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । ‘हामीसँग रहेका पूर्वाधारले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न सकिनेछ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने । राप्ती गाउँपालिकामा १ हजार विगाहा जग्गा रहेको उनले बताए । यसलाई प्रयोग गरेर नयाँ संरचना निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सभाका सांसद दिपेन्द्र पुनले प्रदेश सरकारलाई दाङमा ल्याउन केही समय लाग्ने बताए । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा विकास गर्ने भएकाले समय लाग्ने उनको भनाइ छ । सरकारले प्लानिङ गरेर भौतिक निर्माण गर्ने उनले बताए । जसले गर्दा पछिसम्म पनि सहजता हुने छ । ‘लुम्विनी प्रदेशलाई हरेक दृष्टिले नमुना प्रदेश बनाइने छ,’ पुनले भने ।
अहिले प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रमा जग्गा खरिद–विक्री गर्न रोक लगाएको भन्दै यसका लागि सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे । सरकारले रोक लगाए पनि भित्रभित्र खरिद भइरहेको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै त्यसो नगर्न उनले सुझाव दिए । ‘भोलि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ, समयमै सचेत हुनुहोस्,’ उनले भने ।
छिमेकीले छतबाटै कोरोना सर्लाझैं गरे